युवा नेतृत्वको सवाल र अहिलेका केही भ्रमहरु - Fonij Korea
युवा नेतृत्वको सवाल र अहिलेका केही भ्रमहरु
लेखक: नरध्वज तामाङ `क्षितिज´ | प्रकाशीत मिति: June 20, 2021
युवाको परिभाषा धेरै हिसाबले गर्न सकिन्छ । विभिन्न ठाँउमा फरकफरक हिसाबले यसलाई परिभाषित गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार १५ देखि २४ बर्ष उमेर समुहलाई युवा भनिन्छ । युरोपमा १५ देखि २९ बर्ष उमेर समुहलाई युवा भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा १६ देखि ४० बर्ष सम्मलाई युवा मानिएको छ । यो उमेर समुहको सङ्ख्या देशको जनसंख्याको ४०.६८% छ । गत बर्षदेखि स्वबियुको चुनावमा पनि २८ बर्षसम्मको उमेरहद तोकिएको छ ।
हो, युवा हुनलाई उमेर प्रमुख कुरा हो । त्यसमा कुनै बिमती रहेन । तर उमेरले मात्रै चैं युवा हुँदैन होला भन्ने लाग्छ । यसबारेका फरक मतहरुबारे बिस्तारमा छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ । उमेरसँगै चिन्तन र ब्यवहार पनि युवा टाइपको हुनुपर्छ । उमेरले युवा भएकाहरुको कार्यशैली पनि देखेकै हो । उमेरले ४०/५० कटेकाहरुको काम पनि देखेकै हो । त्यसैले कोहि २५ बर्षको हुँदैमा स्वत: युवा हुन्न । अनि कोहि ५० बर्षको हुँदैमा बुढो भइसक्यो अब यसको काम छैन भन्न पनि मिल्दैन । अर्को कुरा सादगी – सज्जन उमेर र पुस्ताले निर्धारण गर्ने विषय पनि होइन । त्यस्तै बेइमान हुनलाई पनि उमेर र पुस्ताले रोक्दैन । भ्रष्टाचार गर्नलाई उमेरले रोक्दैन ।
मलाई त अचेल सबैजना ठाउँ नपाएर मात्र सादगी भएका हुन् जस्तो लाग्छ । अरुलाई यसो उसो भनेर गाली गरेरमात्रै हुन्न । म त धेरै समस्या आफैंभित्र पो देख्छु । त्यो आत्मानुभुति गर्ने क्षमता हामीसँग छ त ? हामीमा आलोचना पचाउने शक्ति छ त ? हामीमा अत्मानुभुति र आत्मालोचनाको संस्कार कहिले शुरूवात होला त ? अब त ढिलो भएन र ?
यो प्रसङ्ग राजनीतिक नेतृत्वमा युवापुस्ता आउनुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । युवालाई स्पेस दिनुपर्छ भनेर धेरै भाषण सुनियो । राजनीतिक सामाजिक बिश्लेषण पनि धेरै पढियो । तर यहाँ गुदि कुरा फरक छ । धेरैले यो ख्याल गरेकै हुन्नन् । मेरो सिधा प्रश्न छ । तपाईंले कुनै गर्व गर्नलायक एकजना स्वबियु सभापतिको नाम दिन सक्नुहुन्छ ? वा कुनै युवा सङ्गठनको एकजना जेन्युइन नेताको नाम पेश गर्न सक्नुहुन्छ ? जो भोलीको देशको नेतृत्व गर्न सक्ने होस् । अथवा क्याबिनेटमा गईसकेका कुनै युवा नेताको नमूनायोग्य ऎतिहासिक काम भन्न सक्नुहुन्छ ? सायद भन्न सक्नुहुन्न ।
यदि भन्न सक्नुहुन्न भने गुदि कारण अर्कै छ । यहाँनेर युवा भनेर मात्रै नहुने भयो । समस्या हामिले सिधा सोचेजस्तो पटक्कै होइन । पेट दुखेको बेला टाउकोमा दबाई लगाएर हुँदैन । पेटकै दबाई गर्नुपर्छ । अहिले राजनीति फोहोर हुनुमा पुराना पुस्ताले ठाउँ ओगटेर मात्रै होइन । युवा पुस्ताले ठाउँ नपाएर पनि होइन । खासमा राजनीतिमा इमान, भिजन र इथिक्स बिनाकाहरु धेरै भएर हो । यस्तैहरु मुलधारमा हाबी भएर चैं कुरो बिग्रिएको हो । यो वा उ पार्टी भन्ने छैन । शक्तिकेन्द्रमा उनिहरु नै छन् वा शक्तिको वरिपरि उनिहरु नै घुमिरहेका छन् । यस्तो समुहलाई सरकार फेरबदलसँग खासै त्यति सरोकार पनि हुन्न । किनकि उनिहरुको काम जोसुकै आए पनि बन्छ । खासमा उनिहरुको मनैदेखी कुनै पार्टी नै हुन्न । तर अघोषित रुपमा सरकार नै यस्ताहरुले हाँक्ने हुन् । भएको यो चैं हो । अब यसरी चैं सोच्ने कि ! पटकपटक उठ्ने पुस्ताको ईश्यु चैं धनबहादुर नाम राखेपछि मान्छे रातारात धनी बन्छ भन्याजस्तै भ्रममात्रै हो । यहाँको समस्याको गुदि कारण पुस्ता र उमेर हुँदै होइन । मुख्य कारण चैं हाम्रो संस्कार, चिन्तन र ब्यवहार हो । शुरुमा यो सुध्रिनु जरुरी छ । त्यसपछि अरु कुराहरु त्यतिकै ठिक हुँदै जान्छन् ।
धनबहादुर नाम गरेको मान्छे गरिब पनि हुनसक्छ यदि उसँङ्ग धन छैन भने । अथवा उसँङ्ग धन नै भए पनि मन सङ्कुचित छ भने एक हिसाबले उ गरिब नै हो । उत्तम नामक मान्छे खत्तम पनि हुनसक्छ ! यदि उसको चिन्तन, संस्कार र ब्यवहार गतिलो र सँस्कारिक छैन भने । त्यसकारण नाम र शब्दमा अल्झिने भन्दा पनि गुदि कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । बहस बरु यतातिर केन्द्रित गरौं । हाम्रो समाज कता जाँदैछ त ! भुपि शेरचनले भने झैं यो देश सँधैं हल्लैहल्लाको देश भईरहन त मिलेन नि ! आजको मान्छेले सतही कुरा समातेको छ कि गुदि कुरा ! बहस हुनुपर्ने मुल सवाल यहि हो ।
अर्को कुरा, हिजोआज केही मान्छेहरुमा एकदमै सतहीखाले भ्रम सिर्जना भएको छ । त्यसकै पछि कुद्नेहरुको पनि कमी छैन । बाहुनले देश बिगार्यो रे ! जनजातिहरु राजनीतिको फ्रन्टमा आएमा देश बन्छ रे ! त्यसो भए हिजो केही जनजातिहरु ठाँउमा पुगेका थिएनन् र ? पन्चायतकालमा । बहुदलकालमा । अनि अहिले पनि कोहि न कोहि जनजाति मुलधारको राजनीतिमा छन् नि । अहिले त झन् कर्मचारीतन्त्रमा समेत राम्रै उपस्थिति हुन थालेको छ । विशेष गरि राई र लिम्बुहरु । किन अपबादबाहेक अरुले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन् त ? त्यसैले यो जातको मात्रै समस्या होइन ।
मेरो बुझाईमा अहिले जनजाति समाजको सोच र चिन्तन हिजोको भन्दा बिलकुल फरक भईसक्यो । हामीले सोचेभन्दा धेरै नै फरक भैसकेको छ । अलिमाथी पुगेकाले तल ग्राउन्डमा भएकालाई मान्छे नै नगन्ने । तलकाहरुमा पनि ईख लिएर काम गर्ने जाँगर छैन । तिनीहरु आफ्नो पुरानै चौघेरामा सिमित हुन रुचाउँछन् । धेरैजसो सानो घेरामा रम्न रुचाउनेहरु छन् । अझ त्यहाँभित्रको अमुक समुहमा सिमित हुन रुचाउने । आफू थोरै भए पनि अपडेट हुन नचाहने । हावातालमा ठाँउ कुठाँउ बुरुक्क उफ्रेर हिंड्ने । अनि कसरी हुन्छ त शसक्तिकरण । कसरी हुन्छ त नेतृत्व बिकास ! पछाडी पर्यो – पार्यो भनेरमात्रै हुदैन होलानी ?
अझै पनि कहिलेकाहीँ लोकसेवाको परिक्षामा समाबेशी कोटामा आबेदन नै पर्दैन रे । यो कसको कमजोरी हो ? अरुबाट पनि केही त सिक्नुपर्यो नि । ठाउँमा पुगेकाले आफुभन्दा पछिका मान्छेलाई इन्सपायर गर्न सिक्नुपर्यो नि ? आफैं पनि न्युनतम अपडेट हुन सिक्नुपर्यो नि ।
सामुहिक निर्णय गर्नुपर्ने ठाँउमा तानाशाही शैली लादेको हामीले नभोगेको होर ! आजभोली नै पनि मैले भोगेका केही उदाहरणहरु छन् । चाहे त्यो राजनीतिक फोरममा होस् वा सामाजिक फोरममा । अनि त्यहि मान्छे खुब प्रगतिशील कुरा गर्ने ! गर्छन् । यसरी सुहाउँछ र ? अहिलेको जमानामा डबल स्ट्याण्डर्डवाला कुरा धेरै दिन लुकाइराख्न गाह्रो छ । जसरी पनि असली अनुहार देखिन्छ । मलाई त अचेल सबैजना ठाउँ नपाएर मात्र सादगी भएका हुन् जस्तो लाग्छ । अरुलाई यसो उसो भनेर गाली गरेरमात्रै हुन्न । म त धेरै समस्या आफैंभित्र पो देख्छु । त्यो आत्मानुभुति गर्ने क्षमता हामीसँग छ त ? हामीमा आलोचना पचाउने शक्ति छ त ? हामीमा अत्मानुभुति र आत्मालोचनाको संस्कार कहिले शुरूवात होला त ? अब त ढिलो भएन र ?
अर्को कुरा केही सामाजिक अभियन्ता र युवा राजनीतिक अभियन्ता भनिनेहरुको आफ्नै शैली छ । उनिहरु सबैलाई गाली गर्छन् । यसैमा गर्व गर्छन् । ठुलो काम गरेँ भन्ठान्छन् । सबै गलत ममात्रै सहि र सक्षम हुँ भन्छन् । यस्तो पनि कहिँ हुन्छ र ! संसारमा कोहि पनि पुर्ण छैन । अहिलेसम्म यस्तो पुर्ण मान्छे जन्मेकै छैन । बुद्ध पनि पुर्ण थिएन । यसरी हामी पुग्ने चैं कहाँ हो ! समाज र राजनीति कहिल्यै ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हुँदैन । जहिल्यै ग्रे कलरको हुन्छ । कालोभित्र सेतो सेतोभित्र कालो । यसलाई मिलाएर बुझ्नुस् ।
त्यतिकै बहर गोरुजस्तो बुरुक्क उफ्रेर मात्र हुदैन । सुझबुझ भएका युवाले यो एङ्गलबाट सोच्नु जरुरी छ । एकोहोरो हुन्न । जे कुरा पनि दोहोरो हुन्छ । भनिन्छ नि एकोहोरो रोटी पाक्दैन । कमजोरी सबैमा हुन्छ । सबल पक्ष पनि सबैमा हुन्छ । कति राम्रो कति नराम्रो भन्नेमात्रै फरक हो । तलमाथि त भईहाल्छ । तर १००% गलत भन्ने हुन्न । १००% सहि भन्ने पनि हुन्न । आजको पुस्ताले यो तरिकाले चैं सोच्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।
अझ केहिलाई ठुलो भ्रम छ । सामाजिक संजालमा हल्ला गरेरै देश चलाउछु भन्ने । मिडियामा ठुलो स्वरमा कराएरै सबै चलाउँछु भन्ने । प्रशासन र न्यायालय लगायत सबै चलाउँछु भन्ने । यसरी हुने भए राज्यका सारा संरचना कोल्याप्स गरे भैगो नि ! पत्रकारले देश चलाउने होइन । कारवाही गर्ने पनि होइन । गल्ती औंल्याउने र सुझावसम्म दिने उनीहरुको काम हो । तर यहाँ सबै भ्रममा बाँचेका छन् ।
मिडिया र सामाजिक संजालमा कुरा गरेजति राजनीती कहाँ सजिलो छ र ! उहाँहरुले उठान गरेका कतिपय अभियानहरु गलत नहोलान् । त्यसको उच्च सम्मान गर्छु । आवाज उठाउनु त नागरिकको मुख्य अधिकार नै हो । त्यो आफ्नो ठाँउमा छ । तर तपाईं भोलि पार्टी खोलेर खुला राजनीतिमा आउनुस् न । भाइरल अभियन्ता होस् कि बरिस्ठ पत्रकार ! अनि थाहा हुन्छ जनता कति छन् । कस्ता कस्ता छन् । कार्यकर्ता कति छन् । भावनामा बग्नु सजिलो काम हो । भोलि साँच्चिकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा माहोल अर्कै हुन्छ । पछिल्लो चुनावताका रबिन्द्र मिश्रले त्यतिकै भन्या होइनन् । नेपालीले रेस्टुरेन्टमा गएर जति मेन्यु हेरे पनि लास्टमा खाने म:म र चाउमिन नै हो । त्यस्तै यहाँ जतिवटा दलहरु जन्मे पनि मुख्य दल दुईवटा मात्रै हुने हो । निकै मुस्किलले तीन वटासम्म हुनसक्ला । एकचोटी कल्पना गरौँ त, समानुपातिक सिस्टम नभएको भए अहिलेका धेरैवटा दलको हालत के हुन्थ्यो !
ज्ञात रहोस् – भोलि चुनावमै जानुपर्यो भने फेसबूकमा समर्थन गर्नेहरु धेरैले तपाईंलाई भोट हाल्दैनन् । त्यो करिबकरिब प्रमाणित भैसकेको जस्तै हो । एक दुईवटा उदाहरणहरु देखिसकेको पनि छ । हाम्रो अहिलेसम्मको नजिरले पनि त्यही बताउँछ । सबैजसो जनता त पुरानै अमुक पार्टीका कार्यकर्ताहरु छन् । पचास हजार भोट ल्याएर जित्नुपर्ने जमानामा केही हजार जनाले सामाजिक संजालमा बहस छेडेरमात्रै केही हुन्छ त ! सांगठनिक मेरुदण्ड चाहिएन ! यहाँ हजार जनाले हल्ला गरेमा अब देश पुरै आफ्नै कब्जामा छ जस्तो लाग्छ । लाग्नु स्वभाबिक पनि हो । तर यो सत्य हुन्न । फेरि संजालमा उफ्रिनेहरु सबै भोट हाल्नका लागि योग्य नै छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ र !
यो ब्यवस्थामा राजनीति गर्न र त्यसमा टिक्न निकै कठिन छ । अन्यथा भन्न खोज्या होइन । अब पनि चुनाव जित्ने भन्या पुराना दुई तीनवटा दलले नै हो । अरुले त अपबादमा झुक्किएर जित्ने हुन् । झुक्किएर केही सिटमा टिक्ने हुन् । बिजुक्छे र के.सि. बाजस्तै हार्न नि हार्दैनन् । कहिल्यै साइज ठुलो पनि हुँदैनन् ।